“Maxaan sameeyaa si aan u helo ixtiraam?” – Neymar Jr – Gool FM
“Maxaan sameeyaa si aan u helo ixtiraam?” – Neymar Jr
Dajiye September 10, 2021
(Brazil) 10 Sebt 2021. Xiddiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr ayaa weerar afka ah ku qaaday taageerayaasha Seleção, iyo waliba warbaahinta, sababa la xiriira dhaleeceynada joogtada ah ee loo jeedinayo.
Neymar da Silva ayaa noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya abid ee xulka qaranka Brazil ee isreeb-reebka Koofurta Ameerika ee Koobka Adduunka isagoo dhaliyay 12 gool, isagoo ka sare maray halyeeyada Romario, Zico, iyo waliba Ronaldo.
Marka laga yimaado rikoorada iyo guulaha uu Neymar la gaaray Brazil, haddana wuxuu dareemayaa ixtiraam darro dhanka taageerayaasha Brazil ah, iyo sidoo kale warbaahinta halkaas joogta.
Neymar ayaa u sheegay Globo kaddib markii Brazil ay laba gool kaga badisay Peru isreebreebka Koobka Adduunka, wuxuuna yiri:
“Waa iska cadahay in kooxda ay tahay tan ugu muhiimsan, aad ayaana ugu faraxsanahay inaan noqday gooldhaliyaha ugu sarreeya xulka kulammada isreebreebka, iyo ciyaaryahanka ugu gool caawinta badan, haddii ay wax walba hagaagaan, waxay ii noqon doontaa sharaf inaan noqdo gooldhaliyaha ugu sarreeya abid ee Brazil.”
“Laakiin ma aqaan wax dambe oo aan sameeyo si dadku ii ixtiraamaan, waa waqti dheer, sidoo kale waa la mid saxafiyiinta iyo weriyayaasha.”
“Mararka qaar ma jecli inaan ka hadlo wareysiyada saxaafadda, laakiin tani waa daqiiqad muhiim ah, marka waxaan go’aansaday inaan soo baxo si aan ula hadlo warbaahinta.”
“Muddo dheer ayaan sugayay daqiiqaddan” – Lionel Messi
Miyuu qeyb ka noqon doonaa Ronaldo kulanka barri ee Newcastle? Tababare Solskjaer ayaa ka jawaabaya